Monday January 24, 2022 - 11:54:49
Sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya galbeedka qaaradda Afrika ciidamada melleteriga Burkina Faso ayaa inqilaab ku riday dowladdii wadankaasi ka jirtay.
Warbaahinta maxalliga ah ayaa sheegtay in saldhig melleteri lagu xiray madaxweynihii Burkina Faso ninka lagu magacaabo Roch Marc Christian Kaboré.
Rasaas culus iyo madaafiic ayaa saaka aroortii hore laga maqlay meel ku dhow qasriga madaxtooyada magaalada Ouagadougou saacado kadibna melleteriga ay xiray madaxweynihii dalka iyo inta badan golihiisi wasiirrada.
Burkina Faso waxaa ka jirta dowlad wakiil u ah gummeystaha Faransiiska waxayna dowladdan ay sanadadii lasoo dhaafay lakulmaysay cadaadis uga imaanaya shacabka muslimka ah iyo jamaaco jihaadi ah oo xiriir laleh Al Qaacidda.
Melleteriga Ruushka oo duullaan ballaaran ku qaaday gobolka Donbas ee dalka Yukreyn.